धिक्कार छ आधुनिक नर्क ! « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
धिक्कार छ आधुनिक नर्क !
प्रकाशित मिति : २०७६, १४ चैत्र शुक्रबार १०:४६
अंग्रेजी शिक्षा र एनजिओकर्मीहरुले असभ्य घोषित गरेको मूल्यवान संस्कार
स्वास्थ्य सुरक्षा, सरसफाई र नैतिकतामा कति विकसित चेत थियो हामीमा ?
किटाणु मार्नका लागि प्रत्येक दिन गाईको गोबरले घर आँगन पोत्ने।। एन्टी बायोटीकका रुपमा बालिनादली र मानवीय स्वास्थ्यका लागि गहुँतको प्रयोग।। मानसिक स्वास्थ्यका लागि आँगनको वपरिपरि सुगन्धित फुलहरु रोप्ने।। किटाणुको रोकथामका लागि आँगनमा तुल्सी र बाबरीका बोटहरु रोप्ने।। अक्सीजनका लागि आँगन र चौतारीहरुमा पीपलका रुखहरु रोप्ने।। कपडाहरुलाई प्रकृतिक रुपमा सुद्ध राख्नका लागि उमालेको खरानी-पानीमा लुकाहरु पकाएर धुने।।
बाहिरबाट आएपछि हातखुट्टा नधोएर घरभित्र नपस्ने।।, हात धाेएर आगोमा नसेकाउँदासम्म बच्चाहरुलाई नसमात्ने।। अक्सीजनको मात्रा अध्यधिक हुने सूर्योदय अगाडी ४ बजेतिर उठ्ने।। मानसिक स्फूर्तिका लाथि विहान आराधना र पूजा गर्ने।। सूर्यास्तको आसपासमा खाना खाईसकेपछि परिवारलाई नैतिकताको बाटोमा राख्न घरका सबै परिवारहरु जम्मा भै नीति कथाहरु सुनाउने।। घरमा वा पूजाआजामा जडिबुटीका धुपहरु प्रयोग गरेर किटाणुहरुबाट बच्ने।।
शारिरीक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि योग र ध्यानहरु गर्ने।। रजस्वला भएको रगतमा आउने किटाणुबाट बच्न र रक्त श्रावबाट शरिर कमजोर हुने महिलाहरुलाई शारिरीक श्रमबाट अलग गर्न ४ दिनसम्म अलग राख्ने।। किराफट्याङ्ग्रा बस्ने प्वालहरु, खानेपानीको मुहान, नदि किनारा र खुला ठाउँमा दिशापिसाब नगर्ने।। वनस्पतिका रेशाहरुबाट बनेका कपडाहरुको प्रयोग गर्ने।। किटाणुहरु उडेर खानामा नपरुन भनेर खाना खाँदा थालको वरिपरि पानी छर्कने।।
मानिस मरेपछि मृतकले उपयोग गरेका लत्ताकपडाहरु सामानहरु जलाउने।। मृतकलाई छोएकाहरुले अनिवार्य रुपमा नुहाईधुवाई गर्ने।। खानपीनलाई सात्विक, राजशी र तामसि श्रेणीमा वर्गिकरण गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाको चलन चलाउने।। पर्यावरणको महत्वलाई ध्यानमा राखेर पूजा गर्दा ‘वनस्पतय नमः’ भन्ने मन्त्र मार्फत् वनस्पतिहरुको समेत् पूजा, सूर्यको पूजा र पानीको पूजा गर्ने।। नमस्कार गर्ने।। आदि …।। स्वास्थ्य र सभ्यताका लागि २०४७ सालसम्म पनि हाम्राे संस्कार कति माथि थियो ! आज हामी कहाँ छौं ? धिक्कार छ आधुनिक नर्क !